Waad salaaman tahay, casharkaan Jarmalka ah, waxaan ka hadli doonaa khudradda jarmalka ku jirta (die Gemüse). Waxaan ku baran doonnaa keli keli keli keli khudaarta af Jarmal. Ugu horreyntii, waxaan baran doonaa Jarmalka khudradda ugu caansan. Intaad baraneyso Khudradda Jarmalka, waxaan isla baran doonnaa maqaaladiisa. Intaas waxaa sii dheer, waxaan kuu diyaarinay muuqaallo qurux badan oo khudradda ah oo Jarmal ah.
Jarmalkii nimcooyinkaas quruxda badan, khudradda midabada leh iyo lowska uu Rabbigeen inagu maneystay. oo leh keli iyo jamac labadaba waan baran doonaa. Casharkeenii hore Fruit Jarmal Waxaan baarnay mawduuca. Waxaan baranay miro leh muuqaal qurxoon waxaanan sameynay jumlado jarmal ah oo kusaabsan miraha. Hadda waxaan ku baran doonnaa Jarmalka Jarmalka khudradda si isku mid ah.
Ka dib barashada khudaarta Jarmalka, waxaan sameyn doonnaa jumlado fudud oo Jarmal ah oo ku saabsan khudaartaan aan soo baranay markii aan u leexaneyno dhanka hoose ee bogga.
Mawduuca khudradda ee Jarmalku badanaa waxaa lagu dhigaa fasalka 9aad ama 10aad. Koorsadani waxay noqon doontaa ardayda iskood u barata Jarmalka, ardayda fasalka 9aad iyo ardayda fasalka 10aad.
Khudaarta Jarmalka hadda iyagoo wata qoraalladooda iyo keli ahaan iyo jamacyadooda Aan mid mid u baranno khudradda Jarmalka.
Dhirta Jarmalku waa mowduuc la sawiray
U D dhin ZWIEBEL - Basasha
U Dhimo KARTOFFEL - Botato
DHIMO TOMATE - TOMATO
DER FIFFER - BASBAAS
DIID GURKE - SALATALIK
DIID KAROTTE - QAADO
U Dhimo AUBERGINE - Egglan
DER SALAD - Salaar
U Dhimo HASELNUSS - HAZELNUT
WALNUS DIE - WALNUT
U DIID MANDEL - ALMOND
DIID PISTAIZE - PISTACHIO
DER MAIS - MASAR
Khudaarta Jarmalka (Gemüse) Mawduuceena cinwaankiisu yahay wuxuu ku saleysan yahay xifdin. Wax badan ayey kuu anfici doontaa adiga haddii aad ku tababbarto adeegsiga ereyada aad ku xafideysid habka ugu habboon naftaada goor dambe jumlad. Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan ka sheegno mawduucan waa inaad ku xafidaa magacyada khudradda Jarmalka oo ay weheliyaan qodobadooda. Iyadoo aan loo eegin sida quruxda badan ee aad uga fikirto sida aad jumlado ugu sameysid ereyada aad isticmaashid maqaal la'aan, waxaa laga yaabaa inuusan fahmin qofka kale ee aad rabto inaad u sheegto. Tani waxay keeneysaa gunaanadka in jumlada aad u maleyneyso inay runti qurux badan tahay aan macno lahayn.
Khudaarta Jarmal ee miiska
Sawirada kor ku xusan, waxaan isku daynay inaan ku darno khudaarta ugu caansan ee aan inta badan isticmaalno. Hadda aan ballaarinno liistadayada khudradda ee Jarmal oo aan ku soo bandhigno miis si aad u wada wada aragtaan dhammaantood.
der Pfeffer basbaas
dhiman gurke Qajaar
dhinta Tomate yaanyada
dhiman Kartoffel baradho
u dhinta Zwiebel basasha
der Knoblauch toon
der Salat Salad, Salad
dhinto Petersilie Dhir
der Rosenkohl Brussels soo baxday
dhiman Karotte karootada
der Kürbis Bocorka
dhinto Okraschote okra
dhinto weiße Bohne Digirta cas
dhinto grüne Bohne Digirta cagaaran
dhinto Erbse digir
dhinto Aubergine eggplant
dhinto Artischocke Artichoke
Dabcan, waxaa jiri kara khudaar badan oo aanaan ka fikirin inta lagu guda jiro diyaarinta maadadan. Si kastaba ha noqotee, waa ku filan tahay inaad barato khudaarta ugu badan ee la isticmaalo iyo kuwa la cuno ee Jarmalka marka hore. Khudaarta dheeraadka ah waxaa laga baran karaa qaamuusyada Jarmalka goor dambe haddii loo baahdo. Haatan aan u gudubno tusaalayaasheena jumladaha ku saabsan khudradda jarmalka.
Jumlado Tusaalooyin ah oo ku saabsan khudradda Jarmal
Khudaarta Jarmalka Tilmaamaha Summadaha
Hadda aan falanqeyno muuqaalkan muuqaalka ah ee aan aragnay. Wiilka sawirka ka muuqda "Ich esse nicht gern Gemüse”Ayuu yidhi. Haddaba;
Ich esse nicht gern Gemüse : Ma jecli inaan cuno khudradda
Mise haduu rabo inuu dhaho cakis, taasi waa, waxaan jeclahay cunista khudradda, sidee u dhihi lahaa?
Ich esse gern Gemüse : Waxaan jecelahay inaan cuno khudaarta
Farqiga u dhexeeya labada jumladood ee kore waa weedha "maAsal ahaan wuxuu ka soo jeedaa erayga ”. Sida aad u jeeddo "maEreyga ”wuxuu ku darayaa diidmo xukunka.
Hadda aan sameyno jumlado kale oo sidan oo kale ah. Hoos ka eeg jumladaha tusaalaha ah.
Ich esse gern Maise : Waxaan jecelahay inaan cuno hadhuudh
Ich esse gern Karotten : Waxaan jecelahay inaan cuno karootada
Ich esse gern Zwiebeln und Kartoffeln : Waxaan jeclahay inaan cuno basasha iyo baradhada
Ich esse gern Obst und Gemüse : Waxaan jeclahay inaan cuno miraha iyo khudradda
Ich esse ma gern maise : Ma jecli inaan cuno hadhuudh
Ich esse ma gern Karotten : Ma jecli inaan cuno karootada
Ich esse nicht gern Zwiebeln und Knoblauchen : Ma jecli inaan cuno basasha iyo toonta
Sida lagu arki karo tusaalaha jumladaha ku saabsan khudradda Jarmal ee kor ku xusan, jumladaha noocaas ah, qaababka jamac ee walxaha ayaa had iyo jeer la isticmaalaa. Aynu tusaale kale siinno.
Sawirka kore, cunug "Ich mag kein Gemüse. Ich mag Obst”Ayuu yidhi. Sidaas darteed “Khudaarta ma jecli. (Ma jecli khudradda). Waan jeclahay miro.”Ayuu yidhi. Marka maxaa loo isticmaalay "nicht" inuu jumlada ka dhigo diidmo weedho muunadeed hore oo waxaad u maleyn lahayd in "kein" halkan lagu isticmaalay. Aan u sharaxno sida soo socota; Weedho muunadeedkii hore, ereyga "nicht" wuxuu had iyo jeer ahaa kahor falka "gern". Luqadda Jarmalka, "nicht" waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo ficillo xun. Jumlada halkaan, waxaan dhahnaa "Ich mag kein Gemüse". Maaddaama erayga gemüse uu yahay magac, weedhan "kein" waxaa loo isticmaalay meeshii "nicht" erayga hortiisa gemüse. Waxaan bixinay tusaalooyin labada adeegsi ah.
XUKUNYADA XOGTA EE KU SAABSAN Khudaarta Jarmal
Macluumaadka ku saabsan Yaanyada oo Jarmal ah
Hadda aan falanqeyno jumladaha sawirka kore:
Es ist qudhun : Waa casaan
Es ist saftig : Waa casiir
Es hat Kalium, Magnesium, Vitamin A iyo Vitamin C : IYADU WAA; Waxaa ku jira kaalshiyam, magnesium, fitamiin A iyo fitamiin C (wuxuu leeyahay, waxay ka dhigan tahay inuu leeyahay)
ma aha: Maaddaama yaanyada mararka qaarkood lagu tiriyo midhaha, mararka qaarkoodna khudaarta, waxaan ku qeexeynaa inay yihiin miro sawirkan ku jira. Haddaan ula jeedno inay tahay khudrad "Das ist ein GemüseWaa inaan u qornaa sidii ”.
Macluumaad ku saabsan Basbaaska Jarmalka
Das ist ein Gemüse : Kani waa khudrad
Es ist grün und lang : Isagu waa cagaar yahay oo dheer yahay
Es hat Vitamin C : Waxay ka koobantahay fiitamiin C (way leedahay, way leedahay)
Macluumaad ku saabsan Karootada Jarmalka
Es ist lang : Wuu dheeryahay
Es ist oranji : Isagu waa oranji
Es hat Vitamin A, Vitamin B, Vitamin D iyo Vitamin E : IYADU WAA; Waxaa ku jira fitamiin A, fitamiin B, fitamiin D iyo fitamiin E.
Warbixin Ku Saabsan Basasha Jarmalka
Es hat Phospor, Vitamin A, Vitamin B iyo Vitamin C : IYADU WAA; waxaa ku jira fosfooraska, fiitamiin A, fiitamiin B iyo fiitamiin C
Warbixin ku saabsan Baradhada Jarmalka
Es ist oval iyo cadaabta braun : Waa wareegsan yahay oo bunni khafiif ah
Es hat Kalium iyo Vitamin B : IYADU WAA; Waxay kakoobantahay kalsiyum iyo fiitamiin B
Es ist lecker : Waa macaan
Ardayda qaaliga ah, casharkaan, waxaan ku aragnay khudradda jarmalka ilaa hada waxaan qortay jumlado muunad ah oo kusaabsan khudaarta jarmalka. Haatan aan hoos ku qorno qoraallo kooban oo ku saabsan aqoonta guud ee Jarmalka, in kasta oo aysan si toos ah ula xiriirin mawduuca.
WAXYAABAHA LAGU OGAANO KU SAABSAN QUDUUDDA jarmalka
Saaxiibbada qaaliga ah, kor, waxaan siinay khudradda Jarmalka muuqaal ahaan iyo qaab ahaanba. Dabcan, ereyadan waxay u baahan yihiin in la xafido, sida dhammaan ereyada Jarmalka, oo leh maqaalladooda iyo jamacyadooda. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ku soo sheegnay casharradeenii hore, laakiin aan siino xoogaa macluumaad ah anagoo mar kale xasuusinayna inay jiri karaan saaxiibo aan wax aqrin. Waxaa laga yaabaa inay dareenkaaga qabatay intaad baareysay sawirrada kore.
Ma jiro raasumaal I iyo mid yar oo aan ku leeyahay xarfaha Jarmalka. Si kale haddii loo dhigo, xarafka i ma laha xaraf weyn iyo xaraf I ah. Sidaa darteed, sida eray walba, waxaad u baahan tahay inaad ka taxaddarto higgaadinta khudradda ee Jarmal.
Waxaan ku soo sheegnay casharradeena hore. Hadday magac tahay magac habboon ama magac jinsi oo Jarmal ah, xarafka ugu horreeya waa qasab in la weyneeyo. Sida ka muuqata muuqaalka kore iyo miiska, xarfaha horudhaca ah ee magacyada khudradda Jarmalka marwalba waa la weyneeyaa. Xeerkani wuxuu ku ansaxayaa oo keliya magacyada, laakiin looma adeegsan karo sifooyinka, magac u yaalka, shaqalka, shaqallada.
Saaxiibbada qaaliga ahow, Casharkaan oo ku saabsan khudradda Jarmalka;
Waxaan ku baranay khudradda jarmalka maqaalladooda.
Waxaan ku baranay keli khudaarta kali ah iyo jamac Jarmal.
Waxaan baranay sida loo qoro weedho bixin kara macluumaad kusaabsan khudaarta af Jarmal.
Waxaan baranay inaan qoro jumlado kale oo muunad ah oo kusaabsan khudaarta iyadoo la adeegsanayo ficillo sidoo kale.
Taasi waa intaas oo kaliya oo aan kaa siin doonno khudradda ku baxda Jarmal. Hadda waad iska hubin kartaa casharradeena kale. Waxaan kuu rajeyneynaa nasiib.
Tags: 10. fasalka nasiibka mawduuca, Khudaarta Jarmalka ee fasalka 10aad, Khudaarta Jarmalka ee fasalka 11aad, 9. fasalka nasiibka mawduuca, Khudaarta Jarmalka ee fasalka 9aad, Oraahda Jarmal Mögen, oo leh maqaallo khudradda jarmalka ah, oo leh khudaar kala duwan oo Jarmal ah, Oraahda khudradda ee jarmalka, khudradda maadada khudradda ee german, Khudaarta Jarmalka weedho muunad ah, Ha sharraxin khudradda Jarmalka, weedho lagu soo bandhigo khudradda jarmalka, jamac khudaar jamac ah, ich weedho mag, khudradda caanka ah ee german